‘नेपालमा नम्बर १ ब्राण्ड भएरै... :: कमल नेपाल :: Setopati
‘नेपालमा नम्बर १ ब्राण्ड भएरै छाड्ने छौँ’
प्रविधि तथा दुरसञ्चार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अमेरिकी संस्था ‘इन्टरनेसनल डाटा कर्पोरेसन’को सन् २०१७ पहिलो चार महिनासम्मको अध्ययनअनुसार हुवावेले एप्पललाई पछि पार्दै विश्वको दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन कम्पनी बनेको छ।
अध्ययनअनुसार विश्व बजारमा सामसङले करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। उसलाई पछ्याउँदै हुवावेले आफ्नो बजार हिस्सा १२.२ प्रतिशत पुर्याएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको एप्पलको १२ प्रतिशत बजार हिस्सा कायम छ। विश्व बजारमा मात्र हैन, हुवावे नेपाली बजारमा सामसङ पछिको दोश्रो ठूलो फोन विक्रेता कम्पनी हो। हुवावेले नेपालमा १५ प्रतिशत बजार रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
नेपाली बजारमा हुवावेको प्रवेश २०७० सालमा भएको थियो। बजार आगमनको ४ वर्षमै कम्पनीका फोनहरु दुर्गम ठाउँसम्म पुगेका छन् भने विक्रीका दृष्टिकोणले दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यसबाहेक कम्पनीको ‘आफ्टर सेल्स सर्भिस’ लाई सबैभन्दा छरितो मानिन्छ। भर्खरै मात्र हुवावेले ‘नोभा टु आइ’ मोडलको फोन भित्र्याएको छ। फोनको फिचर्सहरुमा सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको यसमा रहेका चार क्यामेरा हो। बजारमा चार वटा क्यामेरा भएको यो एक्लो स्मार्टफोन हो।
प्रस्तुत छ हुवावेका निर्देशक जोयस झुसँग सेतोपाटीका विनोद आचार्यले कम्पनीका उपलब्ध मोडलहरु, बजार प्रदर्शन, भावी योजना लगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
हुवावे नेपाल प्रमुखको नाताले यहाँको मोबाइल बजारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामी स्मार्टफोन लिएर नेपाल आएको केबल ४ वर्ष भयो। तर हुवावे कम्पनी यहाँ आएको भने झण्डै २० वर्ष भईसक्यो। तपाईलाई थाहा छ हामी स्मार्टफोन बाहेक टेलिकम कम्पनीको क्षेत्रमा पनि काम गर्छौँ।
विश्वभरीका करिब ५० ठूला कम्पनीमध्ये ४५ वटामा टेलिकम कम्पनीहरुसँग हामीले नेटवर्क प्रसारणमा सहकार्य गरिरहेका छौँ। नेपालका सबैजसो टेलिकम कम्पनी र हुवावेबीचको सहकार्यले नै आज हामीले बोक्ने फोनमा नेटवर्क पुग्न सफल भएको छ।
यो अवधिमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले लोभलाग्दो प्रगति गरको छ। आज हरेक व्यक्तिको हातमा मोबाइल फोन पुगेको छ। नेटवर्क पनि टुजी बाट थ्रीजी तथा हाल फोरजी पुगेको छ। यत्तिमै सिमित छैन, निरन्तर रुपमा विस्तारित हुँदै गएको छ।
विस्तार हुँदै गएको बजार र मानिसको जीवनशैलीमा हुँदै गएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्मार्टफोन ब्राण्डहरु भित्रिरहेका छन्। यसले पुष्टि गर्छ यहाँको बजारमा ठूलो सम्भावना छ।
हुवावे सबैभन्दा ठूलो स्मार्टफोन बजार चीनको नम्बर १ ब्राण्ड हो। यसका अलावा विश्वमै तपाईहरु दोश्रो ठूलो ब्राण्ड बन्नुभएको छ। नेपाल जस्तो एउटा सानो देशको बजारलाई कम्पनीले कत्तिको महत्वका साथ हेरेको छ?
नेपाल एउटा सानो देश हो। यसको जनसंख्या २ करोड ७० लाख मात्र छ। त्यसैले हुवावे ब्राण्डका लागि पक्कै पनि यो ठूलो बजार हैन। तर हामी संसारको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका चीन, भारत, अमेरिका वा निकै थोरै जनसंख्या भएका नेपाल जस्ता मुलुक सबै बजारलाई उत्तिकै महत्वका साथ हेर्ने गर्छौँ।
संसारभरी आज हामीले जुन छवि बनाएका छौँ, जुन स्मार्टफोनहरु दिएका छौँ तिनको उपभोग तथा अनुभव सबैतिरका प्रयोगकर्ताले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहाना हो। त्यसैले जुन देश गएपनि हामीले अपनाउने रणनीति एकनासको हुने गर्छ। त्यसैले नेपालको बजार पनि हाम्रा लागि संसारका अन्य देश जत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
नेपालमा ४० भन्दा बढी मोबाइल ब्राण्डहरु छन्। त्यस्तै विभिन्न नयाँ ब्राण्डहरु भित्रने क्रम पनि रोकिएको छैन। यसले बजार प्रतिस्र्धा पनि निकै बढाएको छ। यी ब्राण्डहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तथा आफ्नो बजार हिस्सा जोगाइराख्न कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ?
पहिलो कुरा त कुन कुन नयाँ ब्राण्ड आए भन्ने कुरासँग हुवावेले चासो राखेको छैन। कुनै पनि बजारमा नयाँ खेलाडीहरु आउँछन् तर समयसँगै तिनको हालत के भएको छ भन्ने हामी सबैले देख्दै आएका छौँ। मोबाइल फोन भनेको ‘लङ टर्म’ लगानी हो। भित्रनु मात्रै होइन कि बिकीरहनु ठूलो कुरा हो।
हामी विश्वकै दोश्रो ठूलो स्मार्टफोन कम्पनी हौँ। नेपालमै १५ प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेका छौँ। यहाँ को आए को गए भन्ने कुरा जान्ने इच्छा नै छैन।
हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान प्रयोगकर्तालाई उत्कृष्ट तथा नवीन उत्पादन सकेसम्म प्रतिस्पर्धी मूल्यमा दिएर सन्तुष्ट बनाइराख्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। हामी देखिरहेका छौँ, कोही आफूलाई सेल्फीमा सर्वश्रेष्ठ भएको दाबी गर्छन्, कोही ब्याट्रीमा। यतिले मात्र पुग्दैन। स्मार्टफोनमा हुनुपर्ने सबैखाले विशेषतामा ‘ब्यालेन्स’ बनाइराख्नु नै कम्पनीको प्रमुख चुनौति हो।
फोन बिक्री मात्र हैन त्यसपछिको सर्भिसले पनि ब्राण्डको पहिचानमा सकारात्मक प्रभाव बनाउन उत्तिकै भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले हामी यिनै पाटोहरुमा कसरी अझ धेरै उत्कृष्टता थप्न सकिन्छ भन्नेमै तल्लीन छौँ।
हालै सार्वजनिक गरिएको ‘नोभा टु आइ’ ले कस्तो प्रदर्शन गरिरहेको छ?
नोभा टु आईले अपेक्षा भन्दा राम्रो प्रतिक्रया पाएको छ। हुवावे सार्वजनिक गरिएको करिब १५ दिनमै बजारका अधिंकाश पसलहरुमा फोन सकिसकेको छ। हुवावेको अनुभवमा यो नै पहिलो यस्तो अवसर हो जुन सार्वजनिक गरिएको यति छोटो अवधिमै ‘आउट अफ स्टक’ भएको छ।
यो बजारमा उपलब्ध चार क्यामेरा भएको एक मात्र फोन हो। यसमा १३ र २ मेगापिक्सेलका दुई सेल्फी तथा पछाडितर्फ १६ र २ मेगापिक्सेलका दुई क्यामेराहरु छन्।
फोनमा फूलभ्यू डिस्प्ले प्रविधि र उच्च गुणस्तरको ५.९ इन्चको स्कृन छ। ८३ प्रतिशतको स्कृन­टु­बडी रेसियो र १८ः९ आस्पेक्टले यसलाई उत्कृष्ट ‘वाइडस्क्रिन भ्युइग’ को अनुभुति दिन्छ।
यसमा ८ कोर किरिन ६५९ चिपसेटको ‘स्ट्रङ’ प्रोसेसरका साथै ४ जीबीको र्याम तथा ६४ जीबीको इन्टरनल स्टोरेज छ। ३३४० एमएएचको ब्याट्री भएको फोन केबल ३३ हजार ९ सयमा पाउन सकिन्छ। यत्तिका धेरै नवीनतम फिचर्स त्यो पनि यति कम मूल्यमा अन्य कुनै फोन छ भने मलाई देखाइदिनुहोस।
पक्कै पनि हाल बजारमा उपलब्ध सबै कम्पनीका फोनभन्दा यो उत्कृष्ट छ। यसको प्रमाण हामीले यसको विक्रीबाट पाइरहेका छौँ।
नोभा टु आई बाहेक हाल हुवावेको अन्य कति वटा मोडलहरु बजारमा उपलब्ध छन्?
नोभा टु आई बाहेक हाम्रा १० वटा मोडलहरु उपलब्ध छन्। पहिले हामीले यो भन्दा धेरै मोडलहरु बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएका थियौँ। तर पछिल्लो समय हाम्रो ध्यान कम मोडलको सहज उपलब्धतामा केन्द्रित भएको छ। हुवावेले हरेक सेगमेन्टमा एउटा मोडलहरु ल्याउन थालेको छ।
हामीलाई के लाग्न थालेको छ भने धेरै भन्दा पनि कम मोडलहरु भएमा राम्रो हुन्छ किनभने सर्वसाधारणलाई जति धेरै विकल्प दिइन्छ, त्यसले झन् बढी द्धिविधामा पारिदिन्छ। कुन मोडल छान्ने भन्नेमा अन्योल बढाउँछ। त्यसैले हामीले नयाँ रणनीति बनाएका छौँ कम मोडल दिन्छौँ, तर हरेकमा नविनता र पृथकता दिन्छौँ।
अहिले पनि उपत्यका बाहिरका १५ हजार मुनिका फोनको ठूलो बजार छ। त्यस्तै काठमाडौँ तथा अन्य शहरहरुमा प्रिमियम फोनहरु खोज्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। तँपाईले जति सक्दो कम मोडलहरु ल्याउने कुरा पनि उल्लेख गनुभएको छ। कसरी यी दुई प्रकारका ग्राहकहरुलाई सन्तुष्ट बनाइराख्नु हुन्छ त?
हो नेपालको बजार विविधतापूर्ण छ। तर सबैलाई अटाउने बजार भनेको ‘मिड रेन्ज’ फोनको हो। यत्ति भनेर हामी यी दुई अलग थरीका उपभोक्ताको मागलाई वेवास्ता भने गर्ने छैनौँ।
हामीसँग अहिले ९ हजार मूल्यको ‘वाइ थ्री टु’ देखि ७९ हजार को ‘पी टेन प्लस’ सम्मका रेन्जका फोनहरु छन्। त्यस्तै हामीले सम्भवत एक महिना भित्रमा ‘मेट सिरिज’ पनि ल्याउने योजना बनाएका छौँ।
यसबाहेक इन्ट्री लेभलसमेतलाई समेट्दै हामी ‘नोभा’ मोडल पनि ल्याउँदै जानेछौँ।
व्यापारका अलावा हुवावेले ‘कर्पोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व (सिएसआर’ को क्षेत्रमा के कस्ता काम गरिरहेको छ?
हामी नेपालमा स्मार्टफोनको व्यवसाय मात्र हैन, नेटवर्कको काम पनि गरिरहेका छौँ। हामी एउटा ‘इन्टरप्राइज’ हौँ त्यसैले हामी यहाँ तिर्नुपर्ने कर मात्र तिरिरहेका छैनौँ, यसबाहेक समाजप्रति अझ बढी दायित्वको बोध गरेका छौँ।
स्टाफहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सक्षम बनाउने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने किसिमले तालिम दिने गरेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न शैक्षिक संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छौँ। यसबाहेक समाजिक चेतना फैलाउने क्रियाकलाप पनि हामीले गर्दै आएका छौँ।
ट्राफिक प्रहरीले हर्न निशेधित कार्यक्रम ल्याएपछि विभिन्न सडकमा ‘नो हर्न’ लेखिएका समाग्राीहरु राखेर मानिसहरुलाई नियम पालना गर्न झकझकाएका छौँ।
अन्त्यमा, कम्पनीका थप कुनै योजना छन् कि?
वास्तवमा भन्ने हो भने सबै बजारहरु उस्तै हुन्छन्। उत्कृष्ट सामान दिने हो भने त्यसको प्रतिफल पनि राम्रै पाइन्छ। मैले अघि नै पनि भनेँ हामी ‘लङ टर्म’ भिजनसहित यस बजारमा आएका हौँ। उत्कृष्ट फोनहरुसँगै तिनको बिक्री पश्चातको सेवामा पनि उत्तिकै लागनी बढाउँदै लैजाने योजना बनाएका छौँ।
गत महिनादेखि नै उपत्यकाबाहिर सर्भिस सेन्टरहरुको संख्या वृद्धिमा लगानी बढाइरहेका छौँ। पहिलो चरण अन्तर्गत हामीले उपत्यका बाहिरका ८ वटा तथा दोश्रो चरणमा १६ वटा शहरमा सर्भिस सेन्टरहरु फैलाउने लक्ष्य राखेका छौँ।
देश प्रादेशिक संरचनामा गएपछि त्यसै अनुरुप हरेकमा ‘रिसर्च एण्ड डेभेलपमेन्ट’, बजार प्रवद्र्धन, सर्भिस जस्ता क्षेत्रमा छुट्टै समूह बनाएका छौँ। देशका सबै क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकतामा छन्।
भएका पसलहरुलाई थप ग्राहकमैत्री बनाउने कामहरु गरिरहेका छौँ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको त नम्बर १ ब्राण्ड बन्नु नै हो। तर त्यो बिक्रीका दृष्टिकोणबाट मात्र हैन गुणस्तर, प्रयोगकर्ताको अनुभव, बिक्रीपछिको सेवा तथा यथोचित मूल्यमा सहज उपलब्धता लगायतका पक्षमा नम्बर १ भनेको हो।
त्यो त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन। किनभने यसभन्दा अघि मैले विभिन्न देशमा काम गरेको अनुभव छ। म्यानमारमा म जानुभन्दा अघि त्यहाँ हाम्रो बजार हिस्सा १० प्रतिशत थियो ३ वर्षको अन्तरालमा त्यसलाई बढाएर ४८ प्रतिशत पुर्यायौँ।
त्यस्तै लाओसमा ३ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुर्याएको मसँग अनुभव छ। यी बाहेक अन्य धेरै देशमा केही वर्षको मेहेनत पश्चात हामी नम्बर एक ब्राण्ड भएका छौँ।
पक्कै पनि यसका लागि केही समय त लाग्छ। निकै मेहेनत गर्नैपर्छ। हेर्दै गर्नुहोला यहाँ पनि हामी नम्बर एक ब्राण्ड बनेरै छाड्छौँ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १९, २०७४, ०१:०५:५३